Dubai Blog, Macluumaad Dhaqameed, Hagaha, Ku noolaanshaha iyo ka shaqeynta UAE
Xirfadle HR ah oo leh xiriir isgaadhsiineed, is dhex galka iyo xirfadaha soo bandhigida iyo khibrad shaqo oo in ka badan 12 sano ku qaadatay Qaadashada Talent, Maareynta Waxqabadka, Xiriirka Shaqaalaha, Wareegtada Nolosha Shaqaalaha, Barashada & Horumarinta, guud ahaan ITES, Macaamiisha Elektarooniga iyo qeybta Tafaariiqda. Shaqadaydii iigu dambeysay waxay ahayd tii Titan Company Ltd. Toddobadii sano ee khibrada shaqo ee Titan, waxaan mas'uul ka ahaa guud ahaan howlaha HR ee daawashada, indha-shareerka iyo qeybinta Jewelery. Waqtigaan joogaa India, laakiin waxaan diyaar u ahay inaan guuro UAE
Ma ka heshay?1
Qof xamaasad leh, shaqo adag, iyo qof is dhiirrigeliya oo raadinaya meel uu ku bilowdo shaqada hay'ad u leh koritaanka iyo waxtarka. Waxaan haystaa caqli gal macquul ah, maskax leh qaab wax ku ool ah oo loo wajahayo xalinta dhibaatada iyo waddo aan ku arko wax illaa iyo dhammaystirka. Waxaan hayaa il weyn oo faahfaahin ah. Waxaan diyaar u ahay inaan barto, waxaan ku raaxeystaa ka soo kabashada caqabadaha.
Ma ka heshay?0
Wixii shaqo dhejis ah iyo ogeysiis ka socda shirkadda magaalada Dubai ee ajnabiga.JOOBYAALKA Niyad jab, Diplomatic, Anshax, daacadnimo iyo sharaf leh qalin jabinta aqoonta iyo adeegga kooxda, diyaar u ah maaraynta dhibaatooyinka iyo xalka wax soosaarka warshadaha firfircoon oo adag. Khibrad leh masuuliyad iyo aqoon in uu noqdo dariiqa raadinta ee la dejiyo yoolalka iyo himilooyinka hay'ad kasta ee jihaysan ujeeddooyinka iyada oo ujeeddadu tahay in la gaaro himilooyinkeeda himiladeeda iyo himilooyinkeeda. XIRFADAHA Xirfadaha aad u wanaagsan, diyaarna u ah barashada iyo laqabsashada, xirfadaha shaqsi ahaaneed iyo abaabul, xirfad xallinta dhibaatada, kartida aad ugu shaqeyn karto cadaadis iyo kormeer yar ama aan lahayn, natiijo ku saleysan, midabtakoor, koox koox wanaagsan, shucuur caqli badan, howl kar ah, dhageyste firfircoon, xirfad wanaagsan oo gorgortan leh, la isku halleyn karo oo awood u leh inay u gutaan waajibaadka loo xilsaaray waqtigii loogu talagalay iyo si hufan, erayga xafiiska Microsoft (CRM, FINACLE), heer sare, daaqadaha iyo internetka iwm.
Visa ilaa Iran
Waxaad heshay Iran! Ka shaqee Iran Visa ilaa Iran, nolol cusub oo adiga ku sugeysa. Visa wuxuu u sii jeedaa dalka Iran shirkada Dubai City. Iiraan waa dal aad u balaadhan oo loogu safro. Halkaan, waxaad ku soo celin kartaa shaqooyinka. Markaa hadaad raadineysid inaad ka shaqeyso wadankan waxaad ubaahnaan doontaa boqolkiiba boqol inaad hubiso inaad diyaar u tahay inaad qatar gasho. Sida waddankan oo kale, maahan waddan habboon in laga tago sidii qof aan muslim ahayn. Marka waa inaad iska hubisaa inaad tahay qof Muslim ah ama haddii kale, ma awoodid inaad halkaas ka shaqeyso. Dabcan, waxaa jira dad kale oo wax kuu yeeli doona ama wax xumaan ah kugu sameyn doona. Si kastaba ha noqotee, waa inaad raacdaa shareecada. Dhanka kale, waxaad u baahan doontaa inaad hubiso inaad leedahay khibrad kugu filan si aad u gaarto isku aadimaado shaqooyin heer-maamul ah ama xitaa Agaasime ama agaasime. Si fudud maxaa yeelay gudaha [...]